OFX Amerika Atsimo Evolution FSX & P3D
Important OFX Amerika Atsimo Evolution FSX & P3D
1 taona 11 volana lasa izay #559 by Ace9
Rehefa avy nandoa ny saran'ny Jumbo mba télécharger "OFX Amerika Atsimo Evolution FSX & P3D" Izaho miahiahy ny antony ny Antivirus dia maka ny otrik'aretina mailo ka tsy mamela ahy hanokatra ny exe rakitra.
Avast mitatitra Win32: Evo-Gen
Na iza na iza mahafantatra raha tena ny otrik'aretina?
1 taona 11 volana lasa izay #560 by Gh0stRider203
Rog, dia avast ho dokambarotra * lahy. Izany no mampiasa azy io intsony. Be loatra ny zavatra tsara diso. Nampiasa rikoooo aho elaela ary tsy nahazo zazalahy iray otrik'aretina.
tsara ianao handeha Tsy manahy momba ny
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Ace9
1 taona 11 volana lasa izay #562 by Dariussssss
LOL fanairana diso na aiza na aiza ...
1 taona 11 volana lasa izay #566 by Ace9
Efa nametraka azy ka nankany Stanley (Falklands) Toy izany koa ny FTX Base toerana manodidina, no avy amin'ny teny anglisy ny config sy OFX Amerika Atsimo eo an-tampon'ny lisitra laharam-pahamehana ihany Ushuaia Airport mihoatra noho izany. Misy zavatra tsy ampy eo aho, ary mihoatra noho ny exe installer dingana, toy ny config OFX fotoana hafa?